China Oak wodrobu Silent Damping Slide Rail Slider Door Wardrobe Ime Flọ Ngwá Ọrụ # 0108 rụpụta na ụlọ ọrụ | Yamazonhome
Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Slider Door Wardrobe Bedroom Ngwa ụlọ # 0108
Nọmba nlereanya: Amac-01 08
Nha: 1600mm * 560 * 2000mm
Nzube-mee ụlọ dị nso na okike
Ebumnuche mbụ anyị bụ imepụta ụlọ dị mma maka ndị China n'etiti. Mee ka ikuku nke Nordic jiri nwayọọ na-enwu ụlọ, na imepụta ihe dị mfe ma ọ bụghị nke dị mfe ga-alaghachi n'ụlọ na ezi ịma mma ya.
White oak ebubatara site na North America ịmepụta ezigbo osisi siri ike
Nhọrọ nke nlezianya nke ihe bụ naanị maka arịa ụlọ dị elu, na ahịhịa osisi nke mmiri na-asọ na-eweta obi ụtọ na ọnọdụ dị mma. The nnukwu slab e mere kpọmkwem na nkà ịrụ bụ na-atọ. Anyị buru ụzọ belata osisi n'ime 5-11cm. Obosara a nwere ike ịkwado osisi. Osisi kwụsiri ike na-agbanwe ma nwee ike igosi ọka zuru oke ma dịkwa mma, wee họrọ onye na-arụ ọrụ nwere ahụmịhe mara agba. Mkpụrụ ọka na bọọdụ jikọtara.
Push-sere drawer + osisi siri ike nghọta
A na-adọkpụpụta drawer-drawer na bọọdụ nsu na ala iji mee ka nchekwa ahụ nwee ezi uche ma dị mma. Enwere ike itinye ihe ndị dị na drawer ahụ, bọọdụ nsu ahụ nwere ike ịwụba akwa nhicha ahụ, ịchafụ, wdg. A na-ahaziri arịa ụlọ maka ngwa ngwa dị elu nwere ọtụtụ ụdị na ihe dị iche iche. Iji nwee ike ịchọta ihe dị iche iche chọrọ na ihe ịchọ mma, ha niile na-agbaso usoro nke ụkpụrụ ụwa, ma nwee ọtụtụ ule acid-base na corrosion iji hụ na ha agaghị emebi emebi maka iji ya ogologo oge.
Ogbi ngwaike ngwaike
Ngwongwo uzo ndu, nke di nwayo Oge ọ bụla ị mepere ma mechie, ị nwere ike inwe ọnọdụ dị mma na nke dị mma. Ogwe dị n'akụkụ gbatịrị 10mm ma daba n'ọnụ ụzọ ngwugwu ngwugwu. Mgbe emechiri ọnụ ụzọ na-eme mmị, enweghị oghere na uzuzu.
Free kenha n'elu kabinet
N'elu ụlọ ọrụ dị elu, a na-eji oghere kwụ ọtọ, na nsogbu nke nchekwa uwe na-adịghị n'oge a na-edozi site n'otu ụlọ ọrụ. Mgbatị nkwonkwo bụ "usoro nchebe onwe onye" nke arịa ụlọ osisi siri ike, ma debe ya iji gbanwee osisi siri ike na gburugburu ebe dị iche iche. A na-achịkwa usoro mmepụta ihe nke ọma, yana ahụmịhe mmepụta bara ọgaranya. Mgbe ọtụtụ usoro nke egweri na egweri, elu nke ngwaahịa agwụla dị mma.
Ọ dịghị kabinet ụkwụ imewe
Ejikọtara akụkụ ndị bụ isi site na usoro ọdịnala na usoro ihe eji arụ ọrụ, usoro a na-esiwanye ike, ọnụọgụ siri ike nwere ike ịme ka nkwụsi ike nke uwe mkpuchi ahụ ka mma ma mee ka ndụ ọrụ dị ogologo. Ebe a na-eguzo n’elu ala na-akwụsi ike ma na-enweghị nhicha, ọnụ ya na-ewekwa ihe dị n’ime ime iji zere imebi ihe kwa ụbọchị.
Nke gara aga: Oghere Ndidi nile nke osisi na-adọrọ adọrọ Ime roomlọ Ime Nri Nightlọ # 0103
Osote: Westernlọ Ime Ọdịda Anyanwụ Dị Mgba Ugboro abụọ Bed Bed Bed Bed # 0109
Modern and Simple Solid Wood Small Apartment TV ...
Ejiji obere ulo biri n'ụlọ siri ike osisi ...